संग्राहलयमा संग्रहित थारु संस्कृति – Janaubhar
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, साउन ९, २०७७ | 154 Views ||
थारु समुदायको लोपउन्मुख कला,संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्न पश्चिम दाङको चखौरामा वृहत थारु संग्राहलय बनाइएको छ । थारु अगुवा तथा प्रदेश ५ प्रदेश सभा सदस्य डिल्ली चौधरीको संरक्षकत्वमा र योजनाका आधारमा चखौरामा बृह्त था? संग्रालय निर्माण गरिएको हो । उतm संग्राहलयमा दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरसम्मका थारु समुदायका कला, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण गरेर राखिएको संग्राहलयका संरक्षक तथा प्रदेश सभा सदस्य डिल्ली चौधरी बताउँछन । ‘दंगीशरण राजाका पालादेखिका कला,संस्कृतिलाई समेटेर संग्राहलय बनाइएको हो ।
यो संग्राहलयलाई थारु संस्कृति,सम्पदा र सभ्यता अध्ययन गर्ने स्रोत केन्द्र बनाउने लक्ष्य छ’ उनले भने–‘अहिले दाङदेखि पश्चिमसम्मका थारुको सम्पदा यहाँ राखेका छौं । अबको दुई वर्षभित्र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका थारुहरुको सम्पदा यहाँ राखिने छ ।’
द्वापरयुगसँग जोडिएका र इतिहास झल्काउने सम्पदाको खोजी गरिएको र भेटिएका सबै सामाग्रीलाई संग्रहित गरिएको छ । थारु पूर्खा गु?वा (उतिवेलाका डाक्टर) को काम गर्थे । मानिसलाई रोग व्यादले च्याप्यो भने औषधि गर्थे ती कला,कौशललाई मूर्तिमा उतारिएको छ । सय बर्ष अघि थारु पुर्खाले बनाएको ढुगा थारु संग्रहालयमा प्रदर्शनीमा राखिएको छ । गो? र रांगाले हिडाउन मिल्ने लडिया बर्दियामा खुबै चल्थे । अहिले त ट्याक्टर आयो । सबै सामान ट्याक्टरले बोक्छ । गाउँमा त्यसै कुहिएर जान थालेको लडिया संरक्षण गर्न चखौरामा राखिएको छ । थारु समुदायको कला संस्कृतिसँग जोडिएका गहना थुप्रै छन ।
तीन,चार सय प्रकारका गहना थिए । ती गहना अहिले खोजेर भेटिदैनन् । लोप हुन थालेको थारु गरगहना संग्रहालयमा राखिएको छ । थारु समुदायको पोशाकको पनि उत्तिकै महत्व छ । अहिले त ती पोशाक लगाउने मान्छे भेट्न गाह्रो छ । तर,संग्रहालयमा आउनेलाई था? पोशाक लगाउन दिइन्छ । एकछिन पुरुषले ‘भेगुवा’ र महिलाले ‘लेहंगा’ लगाउछन अनि सेल्फी र फोटो दुवै लिन्छन अनि रमाउँछन ।
संग्राहलय प्रवेश गर्ने गेट नजिकै ठूलो कदको था? राजा दंगीशरणको शालिक बनाइएको छ । त्यसपछि अलिपर जाँदा थारु पुर्खा (महतौं) को पूर्ण कदको सालिक छ । अनि दाङको भूगोल सहितको नक्सा पनिसँगै छ । यो संग्रहालयलाई जिवन्त बनाउने काम चलिरहेको थारु विज्ञ श्रमलाल चौधरीले बताए । जिविति थारु संस्कृतिलाई प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिने पनि बनाइएको छ । ‘थारु समुदायको लोपउन्मुख नाच प्रत्यक्ष हेर्न पाइने व्यवस्था पनि गर्दै छौं ’चौधरीले भने–‘थारु संस्कृतिको अध्ययन गर्ने एउटा तालिम केन्द्रनै बनाउने योजना छ ।’
Posted in फोटो फिचर, Flash News
Prevप्रदेश ५ सरकारले पैदल हिँडेकालाई घरसम्म पु‍¥याइदिने
Nextमौसमआँपको यसका छन फाइदै,फाइदा